Budata Adobe Premiere Pro maka Windows
Budata Adobe Premiere Pro,
Adobe Premiere Pro bụ mmemme mmezi vidiyo dị adị nechiche nke usoro iheomume emere iji mezie usoro mmepụta vidiyo. Nwere ike mbubata ma ọ bụ mbupụ niile di iche iche nke media formats nime usoro ihe omume. Mmemme, ebe ị nwere ike idezi ihe ruru 10,240 x 8,192 mkpebi, dọrọkwa uche ya na atụmatụ mmezi 3D ya.
Usoro ihe omume ahụ, nke na-enye gị ohere ịhazi vidiyo ọsọ ọsọ nihi nkwado ọ na-enye maka ụfọdụ kaadị vidiyo pụrụ iche, nwekwara ọtụtụ ọdịyo na vidiyo nke ị nwere ike itinye na faịlụ vidiyo.
Igosipụta nkà na ụzụ GPU kachasị ọhụrụ nke na-enye ndị ọrụ ohere ile vidiyo ahụ tupu hazie ya, Adobe Premiere Pro na-azọpụta gị oge.
Otu kachasị mma nke Adobe Premiere Pro bụ ụdị nkwado ọ na-enye maka ọtụtụ ese foto. Nụzọ dị otú a, ị nwere ike ozugbo nyefee gị dijitalụ foto ma ọ bụ vidiyo na ị were na enyemaka nke gị igwefoto nime usoro ihe omume na-amalite edezi ozugbo.
Nwere ike iji Adobe Premiere Pro, nke ị nwere ike iji kwekọrọ na ngwaahịa Adobe ndị ọzọ, ọ bụghị naanị dịka onye nchịkọta vidiyo, kamakwa dị ka usoro nchịkọta akụkọ mgbasa ozi nozuzu mgbe ọ dị mkpa.
Dị ka ọ dị nọtụtụ sọftụwia Adobe, Adobe Premiere Pro, nke na-achọ arụmọrụ dị elu, naka nke ọzọ, na-arụ ọrụ pụrụ iche maka ndị ọrụ. Mgbe ọ na-abịa video edezi, M maa nwere ike ikwu na ị na-agbalị Adobe Premiere Pro, nke bụ otu nime nelu software.
Adobe Premiere Pro Ụdịdị